Poulet laqué avec du miel - Voyage à Madagascar
par Gaël RAKOTOVAO	 28 octobre 2016
Tao aorinan’ny cotelette laquée dia ity indray ary ny recette de poulet laqué, natao tamin’ny nahandro gasy:
Fotoana hiketrehana azy: 1h30mn
Fotoana hikarakarana azy: 3h
Ail, gingembre, sira, poivre,
Fomba fikarakarana poulet laqué
Tetehina ny akoho dia lomana ail sy gingembre sy sira sy poivre sy sauce soja sy tantely mandritry ny adiny 3h amin’izay mahazo tsiro tsara.
Avy eo ampidirina ao anaty four mandritra ny 1h30 na endasina amin’ny afo malefaka dia vita.
Ny fatrany tantely izany dia miankina amin’ny goût-ny tsirairay. Izay tia mamy be dia raha 1kg de poulet dia 4 càs ny tantely ampiharahina aminy. Avy eo équilibrer-ny sauce soja sy sira dia tsy dia mamy be.
laoka malagasy, poulet laqué au miel, poulet laqué chinois, poulet laqué facile, poulet laqué vietnamien
Article précédent : Kitoza fumée
Pizza à la saucisse fumée et aux poivronsArticle suivant :